Bankiyada Muqdisho oo diiday in la mariyo lacagta ay bixinayaan musharaxiinta - Caasimada Online
Home Warar Bankiyada Muqdisho oo diiday in la mariyo lacagta ay bixinayaan musharaxiinta
Bankiyada Muqdisho oo diiday in la mariyo lacagta ay bixinayaan musharaxiinta
Muqdisho (Caasimada Online) – Bankiyada magaalada Muqdisho ayaa meel adag iska taagay in Koontooyin (Account) ka furan lagu shubo lacagaha ay Musharaxiinta madaxweyne siinayaan Xildhibaanada ee loo yaqaano “laaluushka”.
Sida ay ilo xogagaal ah u xaqiijiyeen Caasimada Online, Maamulka Bankiyada ayaa arrintaas iska diiday kadib markii qaar kamid ah Musharaxiinta isku dayeen inay Koontooyinka Bankiyada ugu shubaan lacagaha ay siinayaan Xildhibaanada.
Go’aanka ay qaateen maamulada Bankiyada ayaa meesha ka saareysa qorshaha Musharaxiinta qaar ee ku aadana lacag siinta Xildhibaanada, taasi oo haddii ay aqbalaan sharaf dhac weyn ku noqon laheyd.
Waxaa si gaar ah arrintan u rabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida aan xogta ku helnay, ayada xildhibaanada midkiiba loo ballan-qaaday 150 kun oo dollar, balse bankiyada ay diideen in la mariyo.
Musharaxiinta mucaaridka ayaa bixinaya lacag u dhaxeysa 30 illaa 60 kun, ayada oo ay ku xiran tahay miisaanka xildhibaanka iyo heerka uu ka caawin karo musharaxa inuu xubno kale kusoo biiriyo.
Wararka ayaa sheegaya in Villa Somalia ay xildhibaankiiba siinayso 150 kun oo dollar, taasi oo noqon doonta lacagtii ugu badneyd ee abid lagu iibsado cod xildhibaan, waxaana adag in la helo musharax bixin kara lacag taas la mid ah.
Lacagaha ay Musharaxiinta siiyaan Xildhibaanada ayaa iska noqotay habraac kamid ah doorashada madaxweynaha, ayada oo musharaxiintuna ay kolba la imanayaan damaanad qaad kala duwan oo ku aadan in codka uu siinayo.
Si kastaba, Doorashada Soomaaliya ayaa maanta la dhammeystiraya, taasi oo qaadatay muddo ka badan hal sano, kadib khilaafaad soo jiitamay oo u dhaxeeyay madaxda sare ee dowladda federaalka, maamulada iyo mucaaridka.